" ရဟန်းဝတ်၅၆ရက်မြောက်နေ့မှာ ဒွေးရုပ်ထုရှိရာချောင်းဝကျောင်းမုဒ်ဦးဝမှာမေတ္တသုတ်တော်ရွတ်ပြီး သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ အမျှဝေဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း'' - Cele Gabar
” ရဟန်းဝတ်၅၆ရက်မြောက်နေ့မှာ ဒွေးရုပ်ထုရှိရာချောင်းဝကျောင်းမုဒ်ဦးဝမှာမေတ္တသုတ်တော်ရွတ်ပြီး သာဓုခေါ်နိုင်ဖို့ အမျှဝေဆုတောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဇွဲနိုင်ဝင်း”
လက်ရှိမှာတော့ မိဘနှစ်ပါးကိုအမှူးထားပြီးသင်ဆရာမြင်ဆရာဖြစ်တဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကိုသားကြီး အတွက် ရည်စူးပြီး ရဟန်းဝတ်နေခဲ့တာသင်္ကန်းသက် (၅၇)ရက် ရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ”(၈.၄.၂၀၂၂) ဒီနေ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကအပြန်ကျွန်တော်နှင့် ဆရာလေး(၅)ပါး ကိုသားကြီးဆီကို သွားပြီး ပရိတ်ရွတ်ဖို့ သွားကြတာမှာ ချောင်းဝကျောင်းက ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ သော့ပိတ်ထားတယ်။ဖုံးဆက်တော့လဲ ကျောင်းက ပိတ်ထားတယ်တဲ့။
အဲ့ဒါကြောင့် ချောင်းဝကျောင်းမုဒ်ဦးဝမှာ ကားရပ်ပြီး ကားပေါ်ကနေ ပဲ ကျွန်တော်နှင့်ဆရာလေး(၅)ပါး မေတ္တသုတ်တော်ရွတ်ကြပြီး အစ်ကို့ကို သာဓု ခေါ်ဖို့ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး။စိတ်လဲမကောင်းဘူး။ဝမ်းလဲနည်းတယ်။ချောင်းဝဘုန်းဘုန်းကျောင်း က ဘယ်လိုဖြစ်လို့ …………..? ကိုသားကြီးနှင့်တကွ အားလုံး ကြားကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါကုန်လော့ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။
CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ဇွဲနိုင်ဝင်းရဲ့ ကုသိုလ်တွေအတွက်သာဓုခေါ်ခဲ့ပါဦးနော်။
” ရဟန္းဝတ္၅၆ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ေဒြး႐ုပ္ထုရွိရာေခ်ာင္းဝေက်ာင္းမုဒ္ဦးဝမွာေမတၱသုတ္ေတာ္႐ြတ္ၿပီး သာဓုေခၚႏိုင္ဖို႔ အမွ်ေဝဆုေတာင္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ဇြဲႏိုင္ဝင္း”
CeleGabar ပရိသတ္ႀကီးေရ ဇြဲႏိုင္ဝင္းကေတာ့အႏုပညာေျခလွမ္းေတြက်ဲေပမယ့္လည္း ပရိသတ္ေတြကအခိုင္အမာအားေပးဝန္းရံလ်က္ရွိဆဲပါပဲေနာ္။ အႏုပညာမ်ိဳး႐ိုးရွိတဲ့သူျဖစ္ၿပီးပရိသတ္ေတြကေတာ့ သဘာဝမင္းသားတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ဇြဲႏိုင္ဝင္းကို သတိတရနဲ႔အားေပးေနၾကဆဲပါပဲေနာ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ မိဘႏွစ္ပါးကိုအမႉးထားၿပီးသင္ဆရာျမင္ဆရာျဖစ္တဲ့ ေက်းဇူးရွင္ ကိုသားႀကီး အတြက္ ရည္စူးၿပီး ရဟန္းဝတ္ေနခဲ့တာသကၤန္းသက္ (၅၇)ရက္ ရွိခဲ့ၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ”(၈.၄.၂၀၂၂) ဒီေန႔ ေ႐ႊတိဂုံေစတီေတာ္ကအျပန္ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ဆရာေလး(၅)ပါး ကိုသားႀကီးဆီကို သြားၿပီး ပရိတ္႐ြတ္ဖို႔ သြားၾကတာမွာ ေခ်ာင္းဝေက်ာင္းက ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိပဲ ေသာ့ပိတ္ထားတယ္။ဖုံးဆက္ေတာ့လဲ ေက်ာင္းက ပိတ္ထားတယ္တဲ့။
အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေခ်ာင္းဝေက်ာင္းမုဒ္ဦးဝမွာ ကားရပ္ၿပီး ကားေပၚကေန ပဲ ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ဆရာေလး(၅)ပါး ေမတၱသုတ္ေတာ္႐ြတ္ၾကၿပီး အစ္ကို႔ကို သာဓု ေခၚဖို႔ေျပာၿပီး ျပန္လာခဲ့လိုက္တယ္။ စိတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုႀကီးလဲ မသိဘူး။စိတ္လဲမေကာင္းဘူး။ဝမ္းလဲနည္းတယ္။ေခ်ာင္းဝဘုန္းဘုန္းေက်ာင္း က ဘယ္လိုျဖစ္လို႔ …………..? ကိုသားႀကီးႏွင့္တကြ အားလုံး ၾကားၾကားသမွ် အမွ် အမွ် အမွ် ယူေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့ သာဓု သာဓု သာဓု ပါ”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။
CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း ဇြဲႏိုင္ဝင္းရဲ႕ ကုသိုလ္ေတြအတြက္သာဓုေခၚခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post ကိုယ်ဝန်ဆောင်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် သင်္ကြန်မှာ ဖျော်​ဖြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်မဏ္ဍပ်မှာမှ သီချင်းမဆိုဖြစ်ကြောင်း ​အသိပေးလာတဲ့အိမ့်ချစ်”
Next post သမီးလေးထရက်ရှာရဲ့ ပထမဆုံး ရွှေတိဂုံဘုရား သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့တာလေးကို ဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးပြီး မျှဝေလာတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်